Toos Ula Soco: Burburka diyaaradii Masar oo la leedahay - BBC News Somali
Toos Ula Soco: Burburka diyaaradii Masar oo la leedahay
Halkan kala soco warar toos ah:
20:50 SGA: Burburka diyaaradda oo laga helay jasiiradda koonfurta Giriigga ee Karpathos, sidaasi waxaa xaqiijiyay saraakiil Maaari ah.
16:54 SGA: Diyaaradda, ayaa labo leexasho oo gaaban sameysay ka hor inta aysan gelin biyaha badda Mediterranean-ka, sidaas waxaa sheegay wasiirka difaaca Giriigga.
14:52 SGA: Wasaaradda Duulista ee Masar, ayaa sheegtay in diyaarada ay heshay cilad farsamo ama mid argagixiso
13:55 SGA: Xoghayaha guud ee NATO, ayaa sheegay inay wixii caawin ah diyaar la yihiin.
13:53 SGA: Wasaaradda Gaashaandhigga Giriigga, ayaa sheegtay in diyaaradda ay badashay jihadeeda.
13:28 SGA: Madaxweynaha Faransiiska, Holland ayaa sheegay inay ogaan doonaan xaqiiqda wixii dhacay, wuxuuna sidoo kale yiri, "Waa inaan waxba la sii mala awaalin".
12:21 SGA: Qaar ka mid ah ehellada dadkii saarnaa diyaaradda EgyptAir ee la la'yahay.
12:18 SGA: Weriyaha BBC ee arrimaha ammaanka Frank Gardner ayaa sheegay inay suuragal tahay in weerar argegixiso aan meesha laga saari karin marka laga hadlayo diyaaradda EgyptAir ee la la'yahay.
12:15 SGA: Wasaaradda arrimaha dibedda ee Masar ayaa soo saartay warbixin ay diyaaradda la la'yahay ku tilmaantay mid soo dhacday, taas oo ah astaantii ugu horreysay ee muujinayso in laga yaabo in diyaaradda ay soo dhacday.
11:09 SGA: Wakaaladda wararka ee AFP ayaa ka soo xigtay hay'adda duulimaadyada ee Giriigga in diyaaradda la la'yahay ee EgyptAir ay ku dhacday badda koonfurta dalkaasi. Cid kale oo war noocaas sheegtay ma jirto ilaa haatan.
11:07 SGA: Madaxweynaha Faransiiska, Francoise Hollande ayaa golahiisa wasiirrada la yeeshay shir deg-deg ah oo looga hadlayo diyaaradda EgyptAir ee la la'yahay.
10:57 SGA: Ammaanka Gegida diyaaradaha ee Paris ee Charles de Gaulle ayaa la adkeeyay, iyadoo lais weydiinayo su'aasha ah waxa ku dhacay diyaaradda EgyptAir ee maqan ee ka duushay isla garoonkaasi.
Lahaanshaha sawirka AirTeamImages
10:47 SGA:Waa sawirka diyaaradda la la'yahay ee EgyptAir
10:34 SGA: Ra'iisalwasaaraha Masar, Ismacil Sharif, ayaa sheegay in ilaa haatan wax war ah laga sheegi karin halka ay ku dambeysay diyaaradda la la'yahay ee EgyptAir.
10:32 SGA: Maraakiib ayaa ku howlan baadi-goobka diyaaradda la la'yahay.
10:30 SGA: Haweeneydan waxay ka mid tahay ehellada dadkii saarnaa diyaaradda EgyptAir ee la la'yahay.
10:20 SGA: Ra'iisalwasaaraha dalka Masar Ismacil Sharif ayaa gaaray goobta lagu daryeelayo ehellada dadkii saarnaa diyaaradda EgyptAir ee la la'yahay. Waxaa uu halkaas kala socon doonaa howlaha lagu baadi-goobaya diyaaradda la la'yahay.
09:44 SGA: Magaalada Qaahira waxaa lagu sameeyay xarun loogu daryeelo ehellada dadkii saarnaa diyaaradda la la'yahay.
09:42 SGA: Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay mas'uuliyiinta duumillimaadyada ee Giriigga oo sheegay inay duuliyaha la hadleen ka hor inta aysan diyaaradda raadaarka ka lumin. "Wax dhibaato ah ma sheegin," ayay leeyihiin.
09:40 SGA: Wargeysa Al-Ahram ee dalka Masar ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee militariga Masar ay billaabeen howlo lagu baadi-goobaya diyaaradda la la'yahay.
09:36 SGA: Shirkadda diyaaradaha ee Masar ee EgyptAir ayaa sheegtay in ehellada dadkii diyaaradda saarnaa ay u sameysay goob ku dhaw garoonka caalamiga ee Qaahira, oo ay u diyaarisay takhaatiir iyo mutarjimiin.
09:34 SGA: Militariga Masar ayaa la sheegayaa inay gaareen goobta loo malaynayo inay ugu war dambeysay diyaaradda la la'yahay.
09:32 SGA: EgyptAir ayaa sheegtay in dalka Giriigga uu ka qeyb-qaadanayo dadaallada lagu baadi-goobaya diyaaradda la la'yahay.
09:29 SGA: Shirkadda diyaaradaha ee Masar ee EgyptAir ayaa sheegtay in qaylo-dhaan ay ka timid diyaaradda la la'yahay ka hor inta aysan raadaarka ka lumin.
09:19 SGA: Hay'adda duulimaadyada ee Masar ayaa sheegtay in diyaaradda raadaarka ka luntay saacadda markay ahayd 02:45 saacadda Qaahira.
09:14 SGA: Ra'iisalwasaaraha Faransiiska ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inuu ka qeyb-qaato baaritaannada lagu baadi-goobaya diyaaradda la la'yahay.
Image caption Weriyayaal ayaa ku soo xoomay gegida caalamiga ah diyaaradaha ee Paris, Charles de Gaulle.
Image caption Militariga Masar ayaa bilaabay howlo lagu baadi-goobaya diyaaradda la la'yahay.
09:08 SGA: Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay furtay xarun loogu tala galay xaaladdan deg-degga ah.
09:05SGA:Madaxweynayaasha faransiiska iyo Masar, Francois Hollande iyo Cabdifataax Al-Sisi, ayaa hadlay waxayna sheegeen inay arrintan diyaaradda la la'yahay iska kaashan doonaan, warkan waxaa laga soo xigtay Reuters.
Image caption Shirkadda EgyptAir oo boggeeda Twitter ku sheegtay in ehellada dadkii saarnaa diyaaradda qaarkood garoonka meel loogu sameeyay
08:58 SGA: Diyaaradda la la'yahay ayaa la sheegayaa inay horey u tegtay dalalka Tunis iyo Eritrea ka hor inta aysan gaarin Faransiiska, oo ay xalay ka soo duushay.
Image caption Ehellada dadkii saarnaa diyaaradda EgyptAir ayaa qaar gaaray gegida diyaaradaha ee Qaahira
08:49 SGA: Shirkadda EgyptAir ayaa haatan daabacday dalalka ay u kala dhasheen dadkii saarnaa diyaaradda: 15 Faransiis ah, 30 u dhalatay Masar, labo u dhalatay Ciraaq, iyo dalalka Britain, Kuwait, Sacuudi Carabiya, Sudan, Chad, Portugal, Algeria iyo Canada oo mi hal qof ah.
08:47 SGA: Rakaabka diyaaradda saarnaa ayaa la sheegay inay u kala dhasheen dalalka Masar iyo Faransiiska. Hal muwaadin oo u dhashay Britain ayaa sidoo kale la sheegayaa inuu diyaaradda ku jiray.
08:23 SGA: Maraakiib laga leeyahay dalka Masar ayaa haatan ku sii socda bartii ugu dambeysay ee diyaaraddu ku sugnayd ka hor inta aysan raadaarka ka lumin.
08:40 SGA: Xilligii ugu dambeysay ee diyaaradda lala xiriiray waxay ahayd 10 daqiiqo ka hor inta aysan raadaarka ka lumin, wargeyska Al-Ahram ee Masar ayaa sidaasi sheegay.
08:37 SGA: TV-ga Masar laga leeyahay ee loo yeqaano ON TV ayaa sheegay in militariga Masar lagu daadgureeyay Badda Mediterranean-ka oo ah halkii ugu war dambeysay diyaaradda la la'yahay.
08:35 SGA: Shirkadda diyaaradda ee Masar, EgyptAir, ayaa sheegtay in tirada dadka saaran diyaaradda ay gaarayaan 66, oo ay ku jiraan carruur.
08:33 SGA:Diyaaradda waxay ku socotay magaalada Qaahira.
08:30 SGA: Diyaaradda ayaa la rumeysan yahay in ay ku dul luntay bariga badda Mediterranean-ka.
08:22 SGA: Wararka ayaa sheegaya in ay diyaaradda saarnaayeen in ka badan 59 rakaab ah iyo 10 qof oo shaqaale ah.
Hay'adda duulimaadyada ee Masar ayaa sheegtay in diyaarad ay leedahay shirkadda Egyptair, oo xalay kasoo duushay caasimadda Faransiiska ee Paris, la la'yahay.